HKCMD.EXE - GINI BU USORO A - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Kedu usoro nke hkcmd.exe
UltraISO bụ uru bara uru maka ịmepụta na idezi ihe oyiyi disk dị iche iche. Otú ọ dị, na mgbakwunye na nke a, usoro ihe omume ahụ nwere ihe ọzọ - ọ nwere ike ịmepụta ma jiri klọpụ arụmọrụ, nke dị iche na ọrụ ha site na ugbu a nanị na ha enweghị ike itinye ezigbo diski. Ma olee otu esi emepụta ndị dị otú ahụ draịva na usoro ihe omume ahụ? Ka anyị hụ!
Ịmepụta windo arụmọrụ
Mbụ ị ga-achọ ịme ihe omume ahụ n'ụzọ ọ bụla ị maara. Ugbu a ịkwesịrị imepe ntọala ndị dị na akụrụngwa menu "Nhọrọ". Ọ dị ezigbo mkpa ka a malite usoro ihe omume ahụ. dị ka onye nlekọta, ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ọlị.
Ugbu a ịkwesịrị ịmepe taabụ "Dọkụt Kwadoro" na ntọala.
Ugbu a, ịkwesịrị ịkọ ọnụ ọgụgụ nke draịva ị chọrọ. Họrọ nọmba nke ngwaọrụ.
N'iwu, nke a niile bụ, ma ị nwere ike ịnyegharị ndị draịva ahụ, maka nke a, ị ga-achọ ịlaghachi na nhazi ụgbọala. Họrọ ụgbọala nke akwụkwọ ozi ị chọrọ ịgbanwe, ma họrọ akwụkwọ mpịakọta, wee pịa mgbanwe.
Ọ bụrụ na i chefuru itinye ihe omume ahụ dịka onye nchịkwa, njehie ga - ebuli, nke a ga - edozi site n'ịgụ ihe na njikọ dị n'okpuru:
Ihe nkuzi: Otu esi dozie njehie ahụ "Ikwesiri inwe ikike nchịkwa."
Nke ahụ bụ usoro dum nke ịmepụta windo arụmọrụ, ugbu a, i nwere ike ibudata ihe oyiyi n'ime ya ma jiri faịlụ ndị dị na mbido a. Nke a bara ezigbo uru mgbe ị na-eji egwu ikikere mgbe egwuregwu ahụ anaghị arụ ọrụ n'enweghị diski. Ị nwere ike ibudata ihe oyiyi nke egwuregwu ahụ na ụgbọala, ma kpọọ dịka a ga-etinye fanyere.